(Waxaa laga soo toosiyay Maxamed "Mo" Faarax)
Mohamed Muktar Jama "Mo" Farah, CBE (wuxuu dhashay 23 Maarso 1983) waa mareeg maski ah oo Ingiriis ah.  Taariikhda Cayaaraha Olombikada ee ugu guulaha badan ee Britishka ah, wuxuu yahay 2012 iyo 2016 Olympic ee dahabiga ah ee 5000 m iyo 10,000 m. Farah ayaa ah ciyaaryahankii labaad ee cayaaraha casriga ah ee taariikhda Ciyaaraha Olombikada ka dib Lasse Virén, si uu ugu guuleysto 5,000 m iyo 10,000 m oo ah tartanada ciyaaraha Olombikada. Waxa uu sidoo kale dhamaystiray 'laba jibbaar' oo ka mid ah tartamada ciyaaraha adduunka ee 2013 iyo 2015. Wuxuu ahaa ninka labaad ee taariikhda, ka dib Kenenisa Bekele, inuu ku guuleysto labalaab dhererka dheer ee ciyaaraha Olombikada iyo Koobka Adduunka, iyo tii ugu horeysay ee taariikhda difaaca labadaba tartamada tartamada caalamiga ah ee labada tartameed ee loo yaqaan 'quadruple-double '.  Tan iyo markii ay dhameysteen kaalinta 2aad ee 10,000 mitir ee tartankii ciyaaraha adduunka ee 2011, Faarax wuxuu ku guuleystay 10 guul ah oo kama dambeysta kama dambeysta ah (5000m sanadkii 2011, 10,000m sanadkii 2017 iyo labadii sanno ee 2012, 2013, 2015 iyo 2016). Farri ayaa ku dhamaaday tartankii orodka kama dambaysta ah ee Fifa, markii uu ku dhameystay kaalinta 2aad ee loo yaqaan 'Muktar Edris' oo ku yaala 2017 5000 mitir. Dhamaan tartanka kama dambaysta ah ee tartanka kama dambaysta ah ee 2017 ee Diamond League ee Zurich bishii August 2017, Faarax wuxuu ka aargoosanayay kubada cagta aduunka, Edris wuxuu ku guuleystay koobkiisii ​​ugu horeeyay ee IAAF Diamond League 5000 mitir.
Socodka, wuxuu inta badan ku tartamayay 5000 mitir iyo 10,000 mitir, laakiin wuxuu tartamay tartan 1500 mitir u jirta marathon. Sanadkii 2017-ka wuxuu cadeeyay inuu doonayo inuu u gudubto tartanka wadada guusha ka dib tartanka kama dambaysta ah ee tartanka, 2017 IAAF Diamond League 5000 mitir. Habka uu u socdo waxaa lagu sharaxay "bouncy" iyo xeelad,   kaas oo uu isku dayay inuu bedelo nidaam habboon oo awood leh oo tamar badan leh, gaar ahaan fogaanta fog.  Faarax waxay si toos ah ula socotaa tartan maskaxeed, qaab ah oo uu ku caawinayo dhamaystirka farsamooyinka degdegga ah. 
Linkiyo banaanka ah[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mo_Farah&oldid=191939"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 11:40, 12 May 2019.